Toban qof oo lala xiriirinayo Al shabaab oo Baardheere lagu qabtay - Halbeeg News
Toban qof oo lala xiriirinayo Al shabaab oo Baardheere lagu qabtay
BAARDHEERE (HALBEEG) – Ugu yaraan 10 qof oo la tuhunsan yahay in ay ka tirsan yihiin ururka Al shabaab, ayaa lagu soo qabqabtay hawlgal 24kii saac ee uu dambeeyey ciidamada ammaanka ee Maamul Goboleedka Jubbaland ka sameeyeen degmada Baardheere ee gobolka Gedo.
Hawlgalkan ayaa yimid kaddib falal ammaanka liddi ku ah iyo dilal qorshaysan oo maalmihii u dambeeyey ka dhacayay degmada Baardheere, kuwaasoo qaarkood ay mas’uuliyaddooda sheegteen Ururka Al shabaab.
Cismaan Sheekh Cabdi Qorrax oo ah Abbaanduulaha Guutada 10aad ee Ciidamada Gobolka Gedo, ayaa laanta afka Soomaaliga ee Idaacadda BBC u sheegay, in dadka lasoo xiray isugu jiraan xubo ka tirsan Al shabaab oo dilal ka gaystay magaalada Baardheere dhexdeeda iyo qaar kale oo tuhun loo soo qabtay xilliganna baaris lagu wado.
Qorrax ayaa sidoo kale sheegay in howlgalkan la bilaabay kaddib markii ciidamada ammaanku heleen xogo muhiim ah oo ku saabsan shabakadaha ka tirsan amniyaadka Al shabaab ee gobolka Gedo ka hawlgala.
Xogtaas ayaa sida taliyuhu sheegay waxaa bixiyey labo nin oo Al shabaab ah oo gacanta lagu dhigay maalmo kaddib markii ay toogasho ku dileen askari ka tirsanaa Daraawiishta Jubbaland.
Gobollada Gedo iyo Jubbada Hoose oo ka tirsan Maamulka Jubbaland, waxay kamid yihiin gobollada ay weli Shabaabku awoodda xoogan ku leeyihiin.
Bohosha sii weynaanaysa ee u dhaxaysa wax soo dejinta iyo Dhoofinta Somaaliya